Iimpawu ezili-10 ezingekhoyo kwiBhlog yakho | Martech Zone
Iimpawu ezili-10 ezingekhoyo kwiBhlog yakho
NgoLwesibini, Julayi 21, 2009 NgoLwesine, Aprili 28, 2016 Douglas Karr
Ezinye ze ingxelo endiyifumene kubafundi kukuba khange ndibonelele ngengxelo eninzi malunga nokubhloga kwi Martech Zone. Ke-namhlanje bendicinga ukuba ndiza kuthatha indlela eyahlukileyo kwaye ndijonge itekhnoloji ejikeleze inkqubo yakho yokubhloga ukubonelela abafundi ngoluhlu lweempawu zokuphonononga nokuqinisekisa ukuba ibhlog yabo inayo.
robots.txt -Ukuba uya kwingcambu (idilesi yesiseko) yedomeyini yakho, yongeza iirobhothi.txt kwidilesi. Umzekelo: https://martech.zone/robots.txt - ngaba ikhona ifayile apho? Ifayile yeerobhothi.txt yifayile yemvume esisiseko exelela i-injini yokukhangela / isicabucabu / ukukhasa ukuba yeyiphi imikhombandlela engayihoyi kwaye yeyiphi imikhombandlela yokukhasa. Ukongeza, unokongeza ikhonkco kwimephu yendawo yakho kuyo! Awunayo enye? Vula incwadana okanye incwadi yokubhaliweyo kwaye uyenze ngokwakho… landela nje imiyalelo kwi Robotstxt.org
Sitemap.xml Imephu yesayithi eveliswe ngamandla yinto ephambili ebonelela ngeinjini yokukhangela nge imephu ukuba uphi umxholo wakho, ubaluleke kangakanani, kwaye ugqibele ukutshintsha nini. Ngowona mvelisi mhle wesayithi endakha ndasebenzisa yile I-XML yeSemap Generator yeArne Brachhold. Ikwangenisa imephu yesayithi kwi-Live / Bing, Yahoo!, KuGoogle kwaye ubuze! (xa inkonzo yokungenisa uBuza isebenza).
Imithombo yeendaba yeNtlalo -Ndinoluhlu olubanzi lweendawo onokuthi undifumane ndithatha inxaxheba kwimidiya yoluntu. Khumbula-ibhlog yakho ayisoloko iyindawo umntu aya kuyo! Ngamanye amaxesha uthungelwano kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni kunye nobuhlobo nabo banomdla oqhelekileyo unokunceda ukukhulisa ibhlog yakho kubaphulaphuli abafanelekileyo… ngaphandle kwebhlog yakho. Kwinqanaba eliphezulu lasekunene, uya kufumana inani leendawo apho ungandifumana khona! Qiniseka ukuba undongeza njengomhlobo, ndiza kubuyisa ubabalo.
Ukuhambelana kweMfono Ukusetyenziswa kwe-Intanethi kwi-Intanethi kuyakhula! Ngaba ibhlog yakho iyafundeka kwiscreen esiphathwayo? KwiWordPress, kukho iplagi efanelekileyo yeWordPress eyenza ukuba ifayile ye Indawo elungiselelwe ukusetyenziswa kweselfowuni kunye nokusetyenziswa kwe-iPhone Safari.
inkcazelo -Ukuba ndibeke kwelinye lamaphepha akho ebhlog yakho, ndingazi ukuba ibimalunga nantoni? Ngamanye amaxesha kunzima ukuxelela ngokufunda isithuba. Ukuba nenkcazo emnandi kwibar esecaleni yakho ukuba loluphi uhlobo lomxholo owunikezelayo lunokubaluleka ekufumaneni abafundi ukuba babhalise okanye babuye.
Qhagamshelana Form -Ndimangalisiwe linani leeblogi ezingenandlela yakwenza nendawo yokuphawula ukuze unxibelelane neblogger! Ngaba unayo ikhonkco lokukhangela elalatha kwiFom yoQhakamshelwano? Iifom zoqhakamshelwano aziphazamiseki kunenombolo yefowuni kwaye azikubeki emngciphekweni wokushiya idilesi ye-imeyile.
Malunga nephepha - Ungubani kwaye kutheni kufanele ndikuthembe? Nokuba uziva uhlekisa ukubhala iphepha elithetha ngeempumelelo zakho ... ayisiyakho, yeyabatyeleli. Banike isikhokelo malunga nokuba kutheni bekufanele bakumamele.
Umqondiso Ngokufika kweebrawuza ezibhaliweyo, kulula kakhulu ukwahlula ibhlog yakho ngokongeza i icon. Ukuba awazi ukuba njani, sebenzisa nje i Umvelisi weFavicon ukwenza ifayile ye-ico (icon) kwaye uyilayishe kulawulo lweengcambu lwewebhusayithi yakho. Ezinye iifayile zemifanekiso zinokusetyenziswa ngokunjalo, okanye imifanekiso okanye ii-icon ezibanjwe kwenye indawo-hlaziya nje ifayile ye- Ikhonkco le-icon emfutshane entlokweni yakho.
isikhanyeli -Ewe, unokumangalelwa ngento oyipapashayo kwibhlog yakho. Zikhusele kunye nepropathi yakho ngokuqinisekisa ukuba unento enkulu lwemibandela!
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -Posa nge Twitter kunye Hootsuite, Qhagamshelwa, Imirhumo ye-imeyile, I-Facebook kunye nokudityaniswa sisixhobo esinamandla, sebenzisa ulwalamano kukufikelela okuphezulu!
tags: malunga nephephaInkcazo yebhlogifomu zoqhagamshelwanolwemibandelaIconumbono weselfowuniiirobhothi.txteKhayaamaqhosha ezentlaloukudityaniswa kweendaba zosasazo
Ngaba urhoxile kwiCompendium Blogware?
Jul 22, 2009 ngo-3: 58 AM
Enkosi ngekhonkco kunye noluhlu olukhulu lweengcebiso. Unenqaku elifanelekileyo malunga nenkcazo kunye nesibhengezo. ukuyongeza kwibhlog yam kunye 🙂.
Jul 22, 2009 ngo-5: 13 PM
Olu luhlu olulungileyo. Ndinenqaku elinqabileyo lokuphisa ngesihloko esinye, ndiza kuqengqa isibini soku kwaye ndinxibelelanise umva ngetyala kunjalo.
Jul 22, 2009 ngo-11: 32 PM
Kutshanje ndibhenele malunga nokuba kunzima kanjani ukufumana ulwazi loqhakamshelwano kwiiblogi kwaye andivumelani nawe ngakumbi. Yintoni eyona nto inkulu? Ke-oops-Ndifumanise ukuba andinandlela ilula kwaye ndayongeza.
Jul 23, 2009 ngo-2: 29 PM
Uninzi lweengcebiso ezilungileyo apha, kunye 'nokuhlolwa' okuhle kwiibhlog. Enkosi!
Ashish @ Magik Izihloko
Jul 14, 2011 ngo-6: 58 AM
Iingcebiso ezintle uDouglas, ndicinga ukuba kufanelekile ukongeza oku kulandelayo kwiirobhothi zakho.txt ngokunjalo
Ukulibaziseka kokurhubuluza: 10
# Umatshini wokugcina izinto kwi-Intanethi kwi-Intanethi
Iarhente yoMsebenzisi: ia_archiver
# digg isipili
Jonga ilog yakho yokungena kwaye ungavumeli ezi zigcawu kuba zibile umda wendlela yakho kwaye zenze indawo yakho ingafumaneki kubatyeleli okwexeshana.